Xukuumadda Xasan Sheekh Oo Joojinta Qaadkii Kenya Uga Iman Jiray Sabab Uga Dhigtay Socdaalkii Dhawaan Guddoomiyaha Gobolka Caleenta Qaadku Kasoo Go’o Uu Ku Yimid Somaliland | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Xukuumadda Xasan Sheekh Oo Joojinta Qaadkii Kenya Uga Iman Jiray Sabab Uga Dhigtay Socdaalkii Dhawaan Guddoomiyaha Gobolka Caleenta Qaadku Kasoo Go’o Uu Ku Yimid Somaliland
Go’aankii Xamar Ku joojisay Jaadka oo ka dhaqan-galay Deegaannada Puntland
Hargeysa (Hubaal) Qaadkii kasoo dagi jiray Garoommada Diyaaradaha Gaalkacyo iyo Qardho ee Puntland ayaan iman Maanta kadib markii labo maalmood ka hor ay DF Soomaaliya joojisay in gebi ahaanba diyaaradahii qaadka ka keeni jiray dalka Kenya aanay soo fadhiisan Karin garoomada. Kabadhada qaadka lagu iibiyo ee magaalooyinka Garoowe iyo Boosaaso ayaa maanta madhnaa maadaama aanu jirn qaad ka soo degay Garoomada Puntland, waxaana meelaha qaarkood la arkayay iyadoo lagu iibinayo qaad dhinaca lugta ah looga soo galiyay Magaalada Laascanood ee Gobolka Sool. Puntland ayaa hore uga soo horjeeday go,aanka DFS ku dhawaaqdey inay ku joojisay Qaadkii Dalka kenya uga iman jiray Soomaaliya, taaso ay ku sheegtay in aanan lagala tashan. Dhinaca kale Dowladda Somalia, ayaa markii ugu Horreysay ka hadashay sababta ay u hakisay Qaadkii ka iman jiray Dalka Kenya, iyadoo Arrintaas sabab uga dhigtay booqashii Guddoomiyaha Gobolka uu Qaadku ka baxo ee Meru, Peter Munya uu dhawaan ku tagay Magaalada Hargeysa.
Danjiraha Somalia u fadhiya Kenya, Jamaal Maxamed Xasan oo Wargeyska Daily Naition siiyay wareysi, ayaa sheegay in booqashadii Peter Munya uu Hargeysa ku tahay bishii July ee sannadkan ay sababtay u tahay in dowladda Somalia ay hakiso ganacsigii Qaadka ee uga iman jiray Kenya.
“Waxaa jira inay fara-gelin ku sameeyeen jiritaanka soohdimaha Somalia, Waxay fara-gelin ku sameeyaan sidoo kale Arrimaha Gudaha ee Soomaaliya,” ayuu Danjire Jamaal u sheegay wargeyska.
Sidoo kale, Danjiraha oo sii Hadlayay ayaa yidhi. “Tani waxay Abuurtay in Dowladda FS ay Hakiso Qaadkii uga iman jiray waddanka Kenya, iyadoo cadaadis iyo ganaax uga dhigaysa ganacsatada Qaadka ee Gobolka Meru.”
Xukuumadda Federaalka Somalia, ayaa ku dhawaaqday Isniintii lasoo dhaafay inay joojisay Qaadkii ka iman jiray Kenya, iyadoo Somalia ay tahay suuqa ugu weyn ee Qaadka Kenya loo iib-geeyo.
Dhanka kale, Muqdisho oo ah magaalada uu Qaadka ugu badan uga yimaado Dalka Kenya ayaa waxaan iman jaad shalay iyo maanta, waxaase suuqyada jaadka Muqdisho qaarkood lagu arkayay Qaad ka yimid Dalka Itoobiya ee loo yaqaanno Hareeriga.
Ugu dambeyn, Bishii July ee Sannadkan 2016-ka, ayuu Peter Munya safar ku tegey caasimada Somaliland ee Hargeysa, si uu u Qal-qaaliyo xeerarka ganacsiga ee dhoofinta Jaadka Dalka Kenya, iyadoo dalka Kenya ay bixinayso beddelkeeda nooc ka mid ah Aqoonsiga Somaliland.